Ibhola lizaphuma kuZimpapers Television Network | uMthunywa
13 May, 2021 - 00:05 2021-05-12T19:10:45+00:00 2021-05-13T00:05:09+00:00 0 Views
ABATHANDI bomdlalo wenguqu kuleli bazakhululeka ukubukela imidlalo besemakhaya abo nanko inhlanganiso yePremier Soccer League (PSL) isivumele ukuthi iZimpapers Television Network ukhiphe imidlalo yeligi kumabonakude.
Abaphathi bePSL bekhokhelwa ngumaqhuzu wabo uKenny Ndebele lequla lenkampani yeZTN basayine isivumelwano lesi ngoLwesithathu.
I-ZTN isanda kunikezwa ichence lokuthi isakaze ngokugcweleyo yiBroadcasting Authority of Zimbabwe.
Umabonakude lo ungaphansi kwenkampani yeZimbabwe Newspapers, eyiyo edinda iphephandaba likazulu, uMthunywa.
Kubikwa ukuba iZTN izakhipha imidlalo isizini ka2021 ize iyephela. IZTN izakhipha imidlalo le kumakhasi asebulenjini ngohlobo lwe-Livestreaming lakusititshi sayo esisebulenjini.
Ngokuphawulwa kwakulesi isivumelwano, imidlalo yakuqala izakhitshwa ngeviki ezayo sekuvulwe inkundla zePSL kumncintiswano oqoqwe yiPSL ukuthi usungule iligi yalonyaka.
Umaqhuzu weZimbabwe Newspapers uPikirayi Deketeke uthe bakhangelele ukuthi ubudlelwano lePSL buyephambili.
“Lesi yisiqalo kithi sonke njengoba sikhangelele ukuthi siyakhe ubudlelwano obuhle,” kutsho uDeketeke.
Isivumelwano lesi size ngesikhathi inhlanganiso yePSL yabika ukuthi abasekeli bamaqembu abasoke bavunyelwe ukuthi babukele ibhola enkundleni.
Ukuvalelwa kwababukeli kudalwa yizinqumo zokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-Covid 19.
Umqeqetshi we-boxing ulwisa imvukuzane&#...01 Jun, 2021
Umncintiswano we-ZRP eNkulumane27 May, 2021
IBosso leChicken Inn ziyakhokhela24 May, 2021